၂၀၁၂ နှစ်သစ် မှာ ကြီးကြီးငယ်ငယ် ပျိုပျိုအိုအို အားလုံး လှုပ်ကြမယ်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » How To.. » ၂၀၁၂ နှစ်သစ် မှာ ကြီးကြီးငယ်ငယ် ပျိုပျိုအိုအို အားလုံး လှုပ်ကြမယ်။
၂၀၁၂ နှစ်သစ် မှာ ကြီးကြီးငယ်ငယ် ပျိုပျိုအိုအို အားလုံး လှုပ်ကြမယ်။
Posted by ဆူး on Dec 29, 2011 in How To.. | 59 comments
အားလုံး လှုပ်ကြမယ် ဆိုလို့ လန့်မသွားနဲ့နော်..
လူလှုပ်ခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူး အကောင့်မှာ သုံးနေတဲ့ avator အရုပ်ကလေး လှုပ်စိ လှုပ်စိ လေးတွေ လှုပ်ပြီး တင်ကြဖို့ အကူအညီပေးချင်လို့ပါ။
ရွာထဲမှာ ပထမဆုံး လှုပ်တာ ပေါက်ဖော်ပါ.. သူလှုပ်တာကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်ကျတော့ ဘာလို့ မရလဲ စဉ်းစားတယ် တင်တယ် ထပ်ခါ ထပ်ခါ တင်တယ် မလှုပ်ပဲ ပုံ အနောက်ခံက မဲမဲကြီး ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ စိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်တာ.. သူများ လုပ်နိုင်တာ ဘာလို့ မလုပ်နိုင်ပါသလဲလို့ တွေးနေတာ..
ပေါက်ဖော် ကို မေးတယ် ဘယ်လို လုပ်ရလဲ မေးတော့ မေးတယ်.. သူပြောတာ နားမလည်ဘူး သူကလည်း စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ၂ခါ ၃ခါလောက်ကို ရှင်းပြရှာတယ် နားကိုမလည်တာ.. နောက်မှ စမ်းရင်းနဲ့ သဘောပေါက်သွာတယ်။ သိပ်တော့ မခက်ပါဘူး။ နည်းသိသွားရင်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
ပထမအဆင့် အနေနဲ့ အွန်လိုင်းမှနေပြီးတော့ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ဖြစ် လှုပ်စိ လှုပ်စိ အရုပ်တွေ ဖြစ်နေတဲ့ *.gif ဘာညာကွိကွ.gif စသဖြင့်ပေါ့.. ကိုယ်သဘောကျတဲ့ ပုံလေးကိုရှာလိုက်ပါ။
တွေ့ပြီဆိုလျှင် ပုံလေးကို.. သိမ်းလိုက်ပါ။
ပုံအရွယ်ကတော့ ကြီးနေအုန်းမယ်။ 50 x 50 pixel သာ တင်လို့ ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အရွယ်ကို လျော့ချရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံကိုတော့ Adobe ImageReady မှာ ဖွင့်ပြီးတော့ အရွယ်ကို လျော့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း Image size ဆိုတဲ့ နေရာကိုရွေးလိုက်ပါ။
ပြထားတဲ့ အတိုင်း ၅၀ ကို ရွေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခါတလေ ၅၀ ရွေးရင်တောင် အရုပ်က မလှုပ်တတ်ပါဘူး ဆိုဒ်အရွယ်အစား ၄၅လောက် ထားလိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း သိမ်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သိမ်းတဲ့ အခါမှာလည်း gif ဖြစ်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။
Browse ဆိုတဲ့ အကွက်ကလေးကို နိပ်လိုက်ပြီး စောစောက သိမ်းထားတဲ့ ဖိုင်ကလေး ကို ရွေးလိုက်ပါ။
ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ လှုပ်ရှား အသက်ဝင်နေတဲ့ ပုံလေး ရပါလိမ့်မယ်။
အင်တာနက်ပေါ်မှာတော့ အဲလို ပုံ အရွယ်ချုံ့တဲ့ ဆိုဒ်တွေ ရှိပါတယ်။ စမ်းကြည့်တာတော့ လိပ်နှုန်းနဲ့ သုံးလို့လား မသိဘူး အဆင်မပြေလှပါဘူး။ အဆင်ပြေပြေ ဆိုဒ်လျော့လို့ ရမဲ့ နည်းတွေကိုတော့ မေးထားတဲ့ လူများနေလို့ ပုံနဲ့ တကွ တင်ပြလိုက်ပါတယ် မရှင်းတာများရှိရင်တော့ မေးနိုင်ပါတယ်။
အခု တင်ပေးတဲ့ အရုပ်လှုပ်နည်းကို မသိသေးသူတွေ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ။ နှစ်သစ်မှာ အားလုံး အသက်ဝင်စွာ လှုပ်နိုင်ကြပါစေ။
လှုပ်ချင်တဲ့ နေရာလေး ရွေးလှုပ်လို့ရရင်ကောင်းမယ်
ရို့ ..ရို့ 
တခါတရံ ၅၀ ဆိုရင်တောင် မလှုပ်ဘူး အဲဒါ ကိုယ်တွေ့.. နော်..
55 px ဆိုရင်ကော မရဘူးလား… လှုပ်တော့မလှုပ်ရှင်ပါဘူး။ ငြိမ်နေတာပဲကောင်းမလဲမသိ။ သူများ မျက်စိရှုပ်နေမှာစိုးလို့…
လှုပ်စရာ ဘာဘာညာညာမရှိဒေါ့ (အရုပ်လှလှတွေပြောပါဒယ်)
လှုပ်ချင်စိတ်လဲမရှိဒေါ့ပါဘူး ဆြာဆူးရယ် …
အင်း ခေတ်မီအောင် လှုပ်ကြည့်ဦးမှ…
ပုံတော့ မလှုပ်ဘူး နာမယ်ကပဲ လှုပ်နေတာ ဒါတောင် မလုပ်တက်လို့
တစ်ယောက်သောသူကို အကူအညီတောင်းရတယ် ……..
တယောက်သောသူကတော့ မပါမပြီး မပြီးရင် မပါဘူးပေါ့..
ကြွားပြီဗျို့ တယောက်သောသူ အကူအညီတဲ့။ မလှုပ်တော့ပါဘူး ဆူးရယ်။ အရင်က ကိုပေါက်ဖေါ်ရဲ့ avator ပုံလေး လှုပ်တာကို ကြည့်လိုက်တိုင်း ကိုယ်ပါ မူးသွားသလိုပဲ။ အခု ဆူးရဲ့ ပုံလေးမြင်ရင် လန့်လန့်သွားတယ် ငါ့များ ပြစ်လိုက်မလားဟဲ့လို့။
တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့ မမှီရယ် ကြုံတုန်းလေးပါ ဟိ
ဆူး …. Thanksalot for your excellent explanation. :-)
အရုပ်လေးလှုပ်အောင် လုပ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်၊ ကျေးဇူးပါနော် ဆူး ……….
အန်တီက လှုပ်တောင် လှုပ်နေပြီနော်.. အကြီးကြီးပဲ..
ပြီးရင် အဖွားဂျီးဆူး ပြောသလို လုပ်မယ်
ကျွန်တော်လဲ တစ်ခမ်းမွှေးကြီး သပ်နေတဲ့၊ လှုပ်နေတဲ့ပုံတော့ လိုချင်သားဗျို့
ကိုရှုံး ရေ ဒီမှာ ရှိတယ်။
Here is one more if you want. :-)
ရမလားလို့ တညလုံးလှုပ်ကြည့်တာ ကြိုက်လို့ရှာထားတဲ့ ပုံလေးတောင်
ရုံးရောက်မှ ထပ်လှုပ်ကြည့်ဦးမယ် အဆင်ပြေရင်နှစ်သစ်ကူးအတွက်..
ငါးအရှင် တကောင်ဖမ်းပြီး ပို့ပေးမယ်..
အမတ်မင်း အခုထိ မလှုပ်သေးပါလား..
မလှုပ်နိုင်ဘူး ဆိုရင် ကြိုက်တဲ့ ပုံပြော ဆူး ကူညီပေးမယ် လင့်သာတင်လိုက် ဆိုဒ်လျော့ပြီး ဖိုရမ်မှာ ပြန်တင်ပေးမယ် ပြန်ကူးပြီး သုံးပေါ့။
ဒေါ်ဆူးရေ ၂၀၁၂ မရောက်ခင်လှုပ်ချင်လွန်းလို့ ပို့လိုက်ပြီနော်..
အဆင်ပြေတဲ့ သုံးလေးပုံ တင်ပေးပေါ့..
ရှဲ ရှဲ ..
ဟိုက လှုပ်ပါဆိုတော့လည်း နည်းနည်းပါးပါး လှုပ်ပြလိုက်ပါဗျာ
လှုပ်လို့ရပြီ … လှုပ်လို့ရပြီ … လှုပ်လို့ရပြီ .. လှူလို့ရပြီ …
လိမ်ဖယ် .. လိမ်ဖယ် … လိမ်ဖယ် …. အဲ …… လူတောင် လိမ်ရွဲ့ တွားဘီ ဟီး ..
အစ်မရေ … လုပ်နည်းလေးပြောပြတာရော .. လုပ်ပြီးသားလေး ပို့ပေးတာရောအတွက် ကျေးဇူးပါ …။
အသစ်တွေလည်း များများ ထပ်ရေးနိုင်ပါစေနော် ။
Adobe ImageReady က ဘယ်မှာရှာရမှာလဲ။
ကြေးမလောင် ကူညီပေးမှာပေါ့.. ကိုကြောင်ကြီး ကြိုက်တဲ့ ပုံကိုပြော ဆိုဒ်ချုံ့ပြီးတော့ ပြန်ပို့ပေးမယ်နော်..
ဒဂယ်ယား။။။။ http://myanmargazette.net/forum/express-yourself/%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%81%E1%80%AF မှာ ရွာသူမီးလေး လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ ကြောင်ပုံနှစ်ပုံရှိတယ်။ အဲဒါတွေကို ဆိုက်ချုံ့ပြီး aungkyuu@gmail.com ကို ပို့ပေးနိုင်မလား။ ပျော်ရွှင်သော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ။။။
လက်ရှိ အက်ဗာတာပုံကိုပဲ ပြင်ပေးပါနော်။ သူ့မူလပုံလှုပ်နေတာ ကြည့်ကောင်းတယ်။ သဂျီးလက်ထဲရောက်မှ ကြောင်ဘဝပျက်သွားတာ။။။ ကျေးကျေးပါ။။
အဲ့ဒါလိုချင်ဝူး….ခေါင်းလောင်းနှစ်လုံးကိုလှုပ်တဲ့ animation ဘဲလိုချင်လို့။ခေါင်းလောင်းကိုလှုပ်ပြပါဗျို့..:P
အလို…. မလှုပ်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်.. အဲဒါ ဆိုဒ်ကြီးနေလို့ ဖြစ်မယ် ထပ်လျော့လိုက်အုန်း။
လှုပ်လို့.. ရပီ.. လှုပ်လို့ရပီ…
အန်တီ ဆူးရေ ကြေးမလောင်က လှုပ်တတ်တာကြာပေါ့..
လှုပ်လို့ ရပြီ ….. လှုပ်လို့ ရပြီ …
လှုပ်လည်း မလှုပ်ပဲနဲ့ လာကြွားနေတယ်။ ဆိုဒ် ထပ်လျော့လိုက်အုန်း ကြီးနေသေးတယ်။
အဘနီ ဘာလို့ ပြုတ်ကျမှာ စိုးတာလဲ.. နတ်တွေ ချောင်နေလို့လား..
လှုပ်ပြီဗို့ ဒီလိုမှန်းသိရင် အစ်မဆူးရဲ့ ဒီပို့ကိုဖတ်ပါတယ်။
မဖတ်မိလို့ သူကြီးကို အကူအညီတောင်းရတယ်။
ကိုဖရဲသီး လှုပ်နိုင်တဲ့ အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ဖရဲသီးလှုပ်တဲ့ ပုံမသုံးဘူးလား.. နာမည်နဲ့ လိုက်အောင်.. ဖရဲသီးပုံတွေ အများကြီး ရှိတယ်။
ကျေးဇူး အစ်မဆူး ကြည့်ပြီး လှုပ်လိုက်အုန်းမယ်
နှစ်သစ်မှာ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ အစ်မ
ဆူးရေ…တစ်ရွာလုံး လှုပ်ကုန်ကြပီ…(၂၀၁၂)မှာ ခေတ်မှီသူတိုင်း လှုပ်ကြပါသည်ပေါ့…အင်း…လှုပ်တော့လှုပ်ချင်သား ဒါပေမယ့် မလှုပ်ရဲဘူးဖြစ်နေတယ်..
လှုပ်စိ လှုပ်စိ လေးတွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ရွာထဲက ပေးထားတဲ့ ရုပ်ဆိုးဆိုးပုံတွေ အစား ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ကိုယ်ရွေးခွင့်ရတာ ပိုကောင်းတယ်လို့ ယူဆလို့ပါ။
2011 ကထဲက လှုပ်ထားပြီးသား ..
၂၀၁၂ မှာ ပိုလှုပ်နိုင်အောင် ပြောင်းလိုက်အုန်းမယ် ….
လှုပ်လေ မြုပ်လေ ဖြစ်မှာစိုးလို့
လှုပ်နေတာကိုပဲ ငေးကြည့်နေတော့မယ် …
(စာကြွင်း။ မလှုပ်ရဘူးတဲ့ … ဒါကြောင့် ငြိမ်ငြိမ်နေသည်) ..
ကျနော်တို့ လဲလှုပ်လို့ ရပီပေါ့။အစက နည်းမသိလို့ ။သိပ်စိတ်ဝင်စားတာပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
သူများတွေလှုပ်တော့ ငှက်ကြီးလဲလှုပ်ချင်လာပြီး အန်တီဆူးရေ…
ပျောက်ချက်သားကောင်းနေတဲ့ မစ္စတာငှက် ကလေး မျက်နှာ မြင်ပြီးလောက်ရောပေါ့။
မတွေ့တာ တော်တော် ကြာနေပြီနော်။
လှုပ်နိုင်တဲ့ အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။
ဆူးရေ အန်တီကို ကြာပန်းလေးတွေ ငုံရာက ပွင့်လာတာရှာပေးပါလား၊
ဆူး ရှာကြည့်လိုက်ပါအုန်းမယ်။ တွေ့ခဲ့ရင်တော့ အီးမေးကို ပို့ပေးမယ်နော်။ ရှာဖို့ ဖွေဖို့ အချိန်နည်းနည်းတော့ ပေးပါ။
ပြောင်းလဲလိုက်တာကတော့ ရှယ်ပဲ ဘာလာလာ အကုန် ပုပ်ထုတ်မဲ့ သဘောပေါ့။
ငြိမ်ငြိမ်လေးပဲ နေပါလို့ မှာထားတဲ့သူများ ရှိနေလား မသိဘူးနော်.. သိပ်တော့ မသင်္ကာဘူး။
မောင်ကင်းတော့ အရမ်းကြောက်ရတဲ့ သူ ရှိတယ်ထင်တယ်။
ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်နဲ့ စိတ်တိုင်းကျသာ လှုပ်ပါ။ နှစ်သစ်ကူး အတွက် ဆူး က သူများနဲ့ မတူတဲ့ လက်ဆောင်လေး ပေးချင်လို့ ဒီပိုစ်လေး တင်လိုက်တာပါ။ ဆုတွေ တောင်းပေးနေကြတာ တယောက်နဲ့ တယောက် ထပ်နေကြပြီ ဆုတောင်းတဲ့ ပိုစ်တိုင်းမှာလည်း လိုက်ပြီး ဆုတောင်း ပေးရတာ မနည်းတော့ဘူး ဆိုတော့.. သူများ မပေးတဲ့ လက်ဆောင်ပေးချင်လို့ ဖန်တီးထားတာပါ။ ကြိုဆိုပါတယ်။
Shar Thet Man (89186 Kyats )